«Da’du waa tiro xisaabeed ku qoran kaarka aqoonsiga» – Waxaa sidaas yiri 36 sano jir wacdaro ka dhigaya Waddanka Talyaaniga! – Gool FM
Real Madrid oo guul dirqi ah ka soo heshay kooxda Sevilla oo ay ku booqatay Estadio R. Sanchez Pizjuan… +SAWIRRO
Man City oo garoonkeeda Etihad guul kaga gaartay kooxda Fulham… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha West Ham iyo Man United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Sevilla iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey… (Benzema oo ku bilowday & Ramos oo maqan)
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Manchester City iyo Fulham ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Sagaal bilood kaddib Taageerayaasha oo loo ogolaan doono inay soo xaadiraan garoomada kulammada maanta ee horyaalka Premier League
“Waxaan jeclaan lahaa inaan qibrad ka soo helo Premier League” – Tababare la la xiriirinayey Shaqada Kooxda Arsenal
Kooxda Manchester United oo xiddig ka qiimo jaban Jadon Sancho ka heshay horyaalka Premier League
Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Real Madrid uga qeyb galaya kulanka adag ee Sevilla… (Yaa ka maqan yaase ku soo baxay?)
Man City, Man United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter, Bayern Munich, PSG & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaarayo shanta horyaallada ee ugu waa weyn Yurub
«Da’du waa tiro xisaabeed ku qoran kaarka aqoonsiga» – Waxaa sidaas yiri 36 sano jir wacdaro ka dhigaya Waddanka Talyaaniga!
Haaruun April 15, 2019
(Rome) 15 Abriil 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Sampdoria ee Waddanka Talyaaniga Fabio Quagliarella ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in isagoo 36-sano jir ah uu hoggaanka u hayo gool dhalinta Horyaalka Serie A-da Talyaaniga.
Quagliarella ayaa dhaliyay 22 gool 2683 daqiiqo oo uu u dheelay kooxda Sampdoria, isagoo sidaa ku hoggaaminaya kala sarreynta goolasha Horyaalka Talyaaniga.
Piatek oo AC Milan u safta ayaa kaalinta labaad ku jira isagoo leh 21 gool, halka Zapata oo Atalanta ka tirsan leeyahay 20 gool, iyadoo Cristiano Ronaldo oo Juventus Weerarka uga ciyaarana uu marayo 19 gool.
Mar la weydiiyay Quagliarella da’diisa iyo sida ay ugu suuro gashay in uu ka goolal bato ciyaartoyda kale ee Serie A-da waxa uu yiri: “Da’du waa keliya tiro xisaabeed ku qoran kaarka aqoonsiga qofka”.
Marka la eego Horyaallada kale ee waa weyn ee Qaaradda Yurub waxaa Quagliarella ka sarreya Lionel Messi oo Bacelona u ciyaara oo dhaliyay 33 gool iyo Kylian Mbappé oo 27 gool u dhaliyay kooxdiisa kulammada horyaallada.
Quagliarella oo goolkii ugu dambeeyey ka dhaliyay kooxda ay isku magaallada yihiin ee Genoa ayaa waxaa guud ahaan uu tan iyo haatan ku lug leeyahay 30 gool oo ay dhalisay kooxda Sampdoria, 22 gool ayuu dhaliyay, halka 8 gool oo kale uu saaxiibadiisa ku caawiyay.
Xubinta maanta oo kale maxaa ka dhacay K/cagta oo aan ku qaadanayno.. (Musiibadii Hillsborough & Goolkii uu CR7 ku qaatay Puskás Award?)
"Isla markii uu Maxamed Saalax Kubbada laaday waxaan la soo booday.....".-